Hollywood Weekly Boxoffice Report: Filimka Glass kaalinta kowaad todobaadkan ku dhameestay – Filimside.net
Hollywood Weekly Boxoffice Report: Filimka Glass kaalinta kowaad todobaadkan ku dhameestay
Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Spencer Treat Clark, iyo Charlayne Woodard filimkooda Glass ayaa USA Boxoffice heesto wuxuuna kaalinta kowaad ku jiraa todobaadkii sedexaad oo xariir ah USA Boxoffice wuxuuna keenay $12.93m todobaadkan ku xeen daaban (1 Feb – 7 Feb 2019) taasi oo ka dhigan wadarta guud mudo sedex todobaad ah inuu soo xareeyay $92.05m filimkan $20m lagu qarash gareeyay guul weyn ayuu gudaha Mareekanka ka gaaray.
Fadlan hoos kaga bogo todobaadkan (1 Feb – 7 Feb 2019) 10-ka filim lacagaha ugu badan USA Boxoffice kasoo xareeyeen:
1. Glass todobaadkan wuxuu keenay $12.93m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $92.05m mudo 3-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
2. The Upside todobaadkan wuxuu keenay $11.84m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $78.58m mudo 4-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
3. Miss Bala todobaadkan wuxuu keenay $9.14m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $9.14m mudo 1-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
4. Aquaman todobaadkan wuxuu keenay $6.05m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $325.24m mudo 7-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
5. Green Book todobaadkan wuxuu keenay $6.43m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $57.93m mudo 12-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
6. Spider-Man: Into the Spider-Verse todobaadkan wuxuu keenay $9.90m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $176.78m mudo 8-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
7. The Kid Who Would be King todobaadkan wuxuu keenay $5.24m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $14.21m mudo 2-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
8. A Dog’s Way Home todobaadkan wuxuu keenay $4.58m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $36.97m mudo 4-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
9. Escape Room todobaadkan wuxuu keenay $3.85m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $53.04m mudo 5-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
10. They Shall Not Grow Old todobaadkan wuxuu keenay $3.55m wadarta guud wuxuu haatan marayaa $11.89m mudo 7-todobaad ah uu tiyaatarada saaran yahay.
F.G: Filimka Hindiga ah Ek Ladki Ko Dekah Toh Aisa Laga oo ay wada jilayaan Anil Kapoor, Sonam Kapoor iyo Rajkumar Rao ayaa $790,595 ka keenay gudaha USA Boxoffice todobaadkiisa kowaad waxaana laga daawaday 193-tiyaatar asigoo kaalinta 24-aad ka galay USA Boxoffice todobaadkan.
Waxaa Aqrisay 368